Vaovao - Inona ny fironana amin'ny vidin'ny akora indostrialy amin'ny 2021?
Mampiseho toetra telo ny fiakarana
Voakasiky ny valanaretina tamin'ny 2020, hatramin'ny tapany faharoa tamin'ny taona, ny akora indostrialy sy ny mpanampy indostrialy dia nampiseho fironana miakatra amin'ny ankapobeny, ary ny vidin'ny vokatra isan-karazany dia nitombo hatrany hatrany. Amin'ny taona 2021, raha ny loharanom-baovao avy amin'ny indostria mifandraika amin'izany, ny vidin'ny akora dia mbola eo amin'ny ambaratonga avo hatrany am-piandohan'ny taona. Miaraka amin'ny famoahana ny vaksinin'ny satroboninahitra vaovao manerantany, hiakatra ny toe-draharaha ara-toekarena an-trano sy any ivelany, ary hihena tsimoramora ny vidin'ny akora indostrialy. Tamin'ny 2021, ny fironana amin'ny vidiny dia tokony haneho ny avo voalohany. Ambany ny fironana.
1. Manomboka amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 2020, hiakatra miodina amin'ny fomba mihodina ny vidin'ny vokatra indostrialy
Tamin'ny volana desambra, ny vokatra indostrialy eto an-toerana dia nisondrotra toy ny avana, ary ny vidin'ny varahina sy vy dia samy nahatratra haavo vaovao tato anatin'ny taona vitsivitsy. Raha apetraka amin'ny fiakarana tsy miova amin'ny Purchasing Managers Index (PMI) tamin'ny volana novambra, dia hita taratra fa ny fangatahana toekarena ankehitriny dia mbola matanjaka ihany. Haharitra hafiriana ny fiakaran'ny vokatra indostrialy ankehitriny, ary ahoana ny fahitanao ny fiovan'ny vidin'ny vokatra indostrialy amin'ny taona ho avy? Ny fanohanana ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra indostrialy amin'ity taona ity dia hahitana ny fanarenana ny tinady sy ny any ivelany ary ny tsy fahaizan'ny famokarana any ivelany, anisan'izany ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany (toeram-pitrandrahana vy sy varahina). ) Nihena ny famokarana, ary tsy naharaka ny fahaizan'ny smelting any ivelany.
Ny lojika amin'ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra indostrialy amin'ny taona 2020 dia ny tsy fitovian'ny famatsiana sy ny fangatahana manerantany eo ambanin'ny fiantraikan'ny valanaretina. Tamin'ny taona 2021, aorian'ny fifehezana tsara ny valan'aretina, ny fifandraisana misy eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana dia tsy tokony ho henjana toy ny tamin'ny taon-dasa. Amin'ny vanim-potoana manaraka, hihena tsikelikely ny vidiny. Raha jerena amin'ireto fanovana manaraka ireto ny vidin'ny vokatra indostrialy manomboka amin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 2020, ny kodiarana manaraka ny tsingerina, manomboka amin'ny metaly fototra ka hatramin'ny angovo, dia tao anatin'ny faritry ny vokatra indostrialy.
2. Mampiavaka ny fiakaran'ny vidin'ny akora indostrialy
Raha jerena ny fampiharana ny mari-pamantarana ny vidin'ny mpamokatra (PPI) ao Shina, ny vidin'ny vokatra indostrialy dia manana resonance matanjaka manerantany. Ny PPI an'i Shina dia mifanaraka kokoa amin'ny fiovan'ny indostrian'ny vidim-piafarana sy ny indostrian'ny angovo sy metaly manerantany, izay mila fomba fijery manerantany kokoa. Ny vidin'ny akora ho an'ny vokatra indostrialy.
Raha ny fahitana ny lafiny famatsiana dia nisy fiatraikany lehibe sy nanova ny firafitry ny gadona indostrialy ilay valan'aretina satro-boninahitra vaovao, miaraka amin'ny famokarana any ambany kokoa ny famokarana any Shina, fa ny fandaminana indray ny rojom-bidin'ny indostrialy dia hitondra ny vidin'ny fikorontanana ary ny famatsiana manerantany ny lamina amin'ny akora indostrialy dia mifototra kokoa, raha vao misy fiantraikany amin'ny faritra isam-batan'olona ny fiantraikan'ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao ary voakasik'izany ny fahaizan'izy ireo mamokatra dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny vidin'ny akora indostrialy eo an-tsisiny.
Avy amin'ny lafiny fitakiana, ny valanaretina satro-boninahitra vaovao dia "namorona" fangatahana vaovao tokoa, ary noho ny politikam-bola sy famporisihana ara-bola goavana amin'ny lafiny toekarena samihafa, dia tsy ratsy ny fivezivezen'ny mponina, ary azo tanterahina ny fangatahana. .
Ity fihomboan'ny vidin'ny vokatra indostrialy ity dia mampiseho toetra telo:
1. Ny vidin'ny vokatra indostrialy dia nisondrotra fatratra tamin'ny vanim-potoana. Misy ny fiheverana fa ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra indostrialy tato ho ato dia mifandraika amin'ny toetr'andro mangatsiaka sy ny fitomboan'ny fangatahana fanafanana. Raha mijery ny vanim-potoana mitovy amin'ny tantara ianao, ny vokatra indostrialy dia tena hiaina fisondrotan'ny vanim-potoana amin'ny volana Desambra, saingy hitantsika amin'ny fiakarana isam-bolana ny vidin'ny vokatra indostrialy Nanhua fa ny fiakarana isam-bolana dia 8,2%. ny volana desambra dia mihoatra lavitra noho ny salan'isa ara-tantara 1,2%, mampiseho fiakarana mihoatra ny fizaran-taona. .
2. Nahatratra ny tampon'ny tantara ny vidin'ny vokatra indostrialy sasany. Niakatra ny vidin'ny karazana vokatra indostrialy. Raha mijery ny Nanhua Futures Commodity Index, ny index metal dia manana ny taha ambony indrindra sy ny fiakarana vidiny lehibe indrindra. Ao amin'ny mari-pahaizana metaly, ny vy dia manana fiakarana lehibe indrindra, arahin'ny varahina.
3. Ny fiakaran'ny vidin'ny akora dia ambony noho ny vidin'ny orinasa taloha. Mampiasa ny vidin'ny fividianana ireo akora fototra ao amin'ny PMI izahay mba hanaovana ny tsy fitoviana amin'ny vidin'ny ex-factory ary hanovana azy io ho isan-taona. Araka ny hita avy amin'ny tabilao etsy ambany, nanomboka tamin'ny Mey, ny fiakaran'ny vidin'ny akora dia nitohy ho avo kokoa noho ny vidin'ny orinasa taloha.
3. Ny fironana vidin'ny akora indostrialy mandritra ny taona 2021 dia avo ary ambany dia ambany
Ho avy ny onja mangatsiaka amin'ny ririnina, miaraka amin'ny fahatongavan'ny Fetiben'ny Lohataona, niditra tamin'ny vanim-potoana tsy vanim-potoana ny vy fananganana an-trano, ary henjana indray ny valan'aretina anatiny sy ivelany. Mbola misy antony tsy azo antoka raha hitohy arak'izay voalaza ny fanarenana ara-toekarena amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021. Raha toa ka tsy misy fiatraikany amin'ny vaksinin'ny vaksinina ny fiovan'ny viriosy dia hampitombo ny tinady amin'ity taona ity ny tsenan'ny vy any ivelany, izay hiteraka fepetra amin'ny fampitomboana ny harinkarena vy any ivelany.
Fantatry ny rehetra fa tsy afaka miakatra sy miakatra matetika ny akora manta. Hisy foana ny fotoana hiverenan'izy ireo. Ilay antsoina hoe ambony aloha dia ambany. Amin'ny voalohany dia miakatra ny vidin'ny akora toy ny vy, arina, varahina, alimo ary vera. Tsy maintsy hitombo ny fiakaran'ny akora. Hisy fiatraikany amin'ny vidin'ny vokatra indostrialy sy ny entan'ny mpanjifa izany. Rehefa miakatra ny vidiny dia ho tara sy avo ny vidim-piainana ary tsy maintsy fehezinao izany.
Raha dinihina ny anton-javatra isan-karazany ao an-trano sy any ivelany, be ny fanantenana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena sy ny fahombiazan'ny akora indostrialy amin'ny 2021. Eo ambanin'ny fanantenana ny hitohizan'ny toekarena manerantany hitazona ny politikam-pamafana vola, ny tena fangatahana eo amin'ny tsena varahina dia tohizana andrasana ao amin'ny 1-2 quartre. Fitomboana tsy miova. Na izany aza, ny vidin'ny varahina dia mety hampidinina amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
thermometer nomerika Aquarium, thermometer nomerika, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, nomerika nomerika mpanara-maso,